Drive, SkyDrive, DropBox နှင့်ပိုမိုသောအရာများ Multcloud | Gadget သတင်း
Multcloud ဖြင့် Cloud ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုစီမံပါ
Killer ရှလကာရည် | | Software များ
Multcloud သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုလူအများစုအတွက်အဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Cloud တွင်အမျိုးမျိုးသောသိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများရှိခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အား host တစ်ခုလုံးတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
Multcloud ကိုအခမဲ့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ပေးသည်, ဒီဝိသေသကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ဖြစ်ခြင်း, အကျိုးကျေးဇူးများမှာများစွာရှိသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့စာရင်းသွင်းနိုင်မည့် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကို (အထူးသဖြင့် cloud တွင်တည်ရှိနေသောသူများ၏စကားပြောခြင်း) အကြောင်းစဉ်းစားမိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လျှင်၎င်းတို့သည်တစ်ခုချင်းစီ၏အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အတွက်အကောင့်တစ်ခု အသံ.
1 အဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့် Multcloud တွင်အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ
2 ကျွန်ုပ်၏ cloud hosting ၀ န်ဆောင်မှုကို Multcloud တွင်မည်သို့ပေါင်းစည်းနိုင်မည်နည်း။
အဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့် Multcloud တွင်အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ
ပိုပြီးကျယ်ပြန့်စွာကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုရန် အသံဤဆောင်းပါးတွင်အကောင့်ဖွင့်သောအခါနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုရာတွင်လုပ်ဆောင်ရမည့်နောက်ဆက်တွဲအဆင့်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှထုံးတမ်းစဉ်လာအရဤဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်စာဖတ်သူအားဤစာကိုညွှန်ကြားမည့်လင့်ခ်ကိုချန်ထားမည် cloud hosting service manager
ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်သည် (ဤစနစ်သည် Mozilla Firefox၊ Google Chrome, Internet Explorer နှင့်အခြားအနည်းငယ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်) ။
ခလုတ်ကိုရွေးချယ်သည်။အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း»အခမဲ့အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန်၊Login» အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှာစာရင်းသွင်းပြီးပြီနှင့်သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားများရှိလျှင်။
ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ထားသောအခမဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်အီးမေးလ်အသစ်သို့ပို့လိုက်သော link အကြောင်းဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်စာတိုက်ထဲသို့သွားပြီးပေးထားသော link ကိုနှိပ်ပါ အသံ.
အခမဲ့အကောင့်ဖွင့်ခြင်းအတည်ပြုခြင်းဖြင့်ဘရောက်ဇာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။Login»ထိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် option တစ်ခုအဖြစ်ပြသသည်။
ကျနော်တို့တသမတ်တည်းဖော်ပြခဲ့တဲ့သောဤခြေလှမ်းများအားလုံးနှင့်အတူယခုငါတို့ interface ကိုအတွင်းကိုယျ့ကိုယျကိုတွေ့လိမ့်မည် အသံဤစနစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုထိုနေရာတွင်ကြည်ညိုလေးစားခြင်း။
ကျွန်ုပ်၏ cloud hosting ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သို့ပေါင်းစည်းမည်နည်း အသံ?
ယခုသင်ခန်းစာ၏ဒုတိယပိုင်းတွင် Cloud Services တစ်ခုချင်းစီကိုမည်သို့ပေါင်းစည်းနိုင်မည်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။ အသံယူပြီး Google Drive အတွက်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်; နောက်ဆက်တွဲလိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကို၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားများဖြင့်စတင်သည်။
ကျနော်တို့ tab ကိုခုန် အသံ.
Google Drive ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ
«အပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ဂူဂဲလ်အကောင့်ထည့်ပါ» (ဂူဂဲလ်ဒရိုက်၏အဖြစ်အပျက်အတွက်) ။
ကျနော်တို့ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အခြား window ကိုခုန်ပါလိမ့်မယ် အသံ ၀ န်ဆောင်မှုကအဆိုပြုထားသောအသုံးပြုမှုအခြေအနေများကိုလက်ခံရန် Google Drive နှင့်အတူ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မူရင်း ၀ င်းဒိုးသို့ပြန်သွားမည် အသံ လုပ်ညှိနှိုင်းအတူ။
ဒီဒုတိယပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းနဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ် အသံ Drive နှင့်အတူတူပင်လုပ်စဉ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ထူးခြားချက်အချို့ကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုပင်အခြားသူများမှအဆိုပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိတ်ဆက်သွားမည် Microsoft မှ SkyDrive, အရင်ကငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုမှာ session တစ်ခုစလုပ်ရမယ်၊ ကောင်းစွာ Hotmail.com ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အတူတူပင်ဒါကြောင့်တက်ကြွသောဖြစ်ရပ်အတွက်), ထောက်ခံသောအခြားသူများအဘို့တူညီသောလမ်းအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိခြင်း အသံ.
ကျနော်တို့ချိတ်ဆက်သောအကောင့်အားလုံး အသံ ဘယ်ဘက် sidebar တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။Cloud Drive ထည့်ပါ» အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်ရန်ကန ဦး မျက်နှာပြင်သို့ပြန်လိုလျှင်။ ဤ cloud hosting ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သောဖိုင်များအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည် အသံ, ထိပ်ရှိခလုတ်များကြောင့်လုပ်နိုင်သောအရာ -
ဒေါင်းလုပ် (download) ။
ဖိုင်တွဲအသစ် (ဖိုဒါအသစ်) ။
သင် ၀ န်ဆောင်မှုရနိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့မှရသော Cloud ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေ အသံ၎င်းသည်အချိန်မရွေးလုပ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Echo Comics သည် Windows 8 အတွက် SkyDrive အထောက်အပံ့ပါဝင်သည့်ရုပ်ပြစာဖတ်သူဖြစ်သည်, Google Drive - ဂူဂဲလ်ရဲ့အွန်လိုင်းသိုလှောင်မှုစနစ်အသစ်, ကျွန်ုပ်၏ Hotmail အကောင့်ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
link - အသံ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » Multcloud ဖြင့် Cloud ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုစီမံပါ
VHD virtual disk image ဆိုတာဘာလဲ။
XBox ဝဘ်ပေါ်မှာနေထိုင်ပါသလား။ ဒါကြောင့် Windows 8 နဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရအောင်